Onye na -emepụta ọkachamara China maka nha dị iche iche nke seramiiki Flat Burrs ndị na -eweta ya na ndị na -eweta ya Trimill
Onye nrụpụta ọkachamara maka nha dị iche iche nke seramiiki ewepụghị
Onye na -egwe ọka grinder bụ akụkụ kachasị mkpa nke igwe nri. Burrs dị iche iche ga -ekesa okpokoro ntụ ntụ kọfị ozugbo. A na -ekewa ụdị burrs ndị a na -eme ugbu a n'ụdị conical burr, flat burr na ghost ezé burr.
Flat burr: Ọ nwere burrs abụọ dị larịị, otu burr na -anọghị ọdụ, nke ọzọ na -ahụ maka ịtụgharị na -egwe ihe. Ọ na -egweri agwa kọfị n'ime nsogbu dị iche iche site na ịcha, yabụ na ọdịdị ya na -adịkarị n'ụdị flakes. Ọdịdị ya bụ na a na -edobe burrs nke elu na nke ala na ibe ya, a na -akwanye agwa kọfị maka igirigi site n'ike ntụgharị nke burr ala. Yabụ, ịdị arọ agwa kọfị dị n'elu ga -emetụta ịdị n'otu nke agwa kọfị n'ime burrs. N'ihi mmetụta nke agwa kọfị, oke nke ntụ ntụ na -abawanye. Agbanyeghị, burr dị larịị dị n'ụdị mpempe akwụkwọ yana mpaghara mgbidi sel buru ibu, yabụ enwere ike ịbawanye mkpokọta kọfị na mmịpụta n'ime obere oge. Ọnụego na isi na -abawanye n'ime obere oge. N'ihi ntakịrị flakes dị larịị, ọ na -esiri ike iwepụta ogologo oge iji mee ka mmiri buru oke ibu wee mepụta ụtọ dị iche iche. Kwesịrị ekwesị maka igwe nri Italiantali na igwe nri aka.
A na -ekewa burr dị larịị n'ime ihe abụọ: seramiiki na igwe anaghị agba nchara. Efere dị larịị nke seramiiki nwere uru nke ịdị ike dị elu, ọnụ ahịa dị ala, enweghị isi pụrụ iche, na ịsa mmiri.
Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na mmepụta seramiiki ewepụghị burrs maka afọ 20, anyị nwere ahụmịhe bara ụba na nhazi ngwaahịa, nhazi profaịlụ ezé na nhazi ịdị larịị, ihe ndị a bụ isi ihe na -emetụta arụmọrụ nke ighe ntụ na ịdị mma na ịdị n'otu nke ntụ ntụ. .
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara na -agbanwe agbanwe akwụkwọ ntuziaka kọfị kọfị
Osote: Ahaziri igwe anaghị agba nchara Glass karama Nnu ose shakers
Efere Grinder Burr